Ngokuvamile abasanda kushada ngosuku lwabo lomshado bacabange ukuthi ngelinye ilanga uthando lwabo lungagcina futhi umuntu angaba yinto enengekayo. Lokhu kuvame ukuphela ngesehlukaniso. Siphakamisa ukuthi uhlaziye isimo somshado wakho ngokukuqhathanisa nezici ezizoboniswa ngezansi.
Sekuyiminyaka eminingi, izazi zengqondo emhlabeni jikelele ziye zabhekana nezinkinga ezifanayo izikhathi eziningi, kanti abanye baye benza izibonakaliso, becabanga ukuthi ungenza okuthile ukuze ulondoloze impilo yomndeni wakho.
Ithembo elincane kakhulu ekukhulumisaneni. Akungabazeki ukuthi noma ngubani ongayithanda lapho imibuzo yakhe iphendulwa ngokungazelelwe futhi ngokungalungile, futhi ngezinye izikhathi ngokuhleka usulu. Noma yimiphi imibono ibona amabhuloho futhi ibizwa ngokuthi "i-kindergarten". Akekho othanda lapho othandekayo wakhe ehlekisa ukuhluleka kwakhe emsebenzini noma ekuphileni. Isimo sengqondo esinjalo nebudet asibekezeleli muntu, futhi umshado uphela, ugcwele isahlukaniso esichazwe ngenhla. Ungabuyi phansi ukuhlazeka nokuhlekwa usulu kwesigamu sesibili. Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuhlala ekusekeleni nasekuqondeni, futhi uma isigamu sesibili sinomculo omnyama empilweni, kuyafaneleka ukusiza okungenani ngesimo sengqondo esihle.
Uma umndeni wakho uvame ukumangalela, ukugxeka okungenangqondo futhi kunesabelo sokudelela, khona-ke le nkinga kufanele ixazululwe ngokushesha. Ngokusebenzisa indlela "omkhulu" - ubulili akusizi ngaso sonke isikhathi ukuxazulula le nkinga. Ngokuyinhloko, lapho umbhangqwana uqaphela iphutha labo, baphendukela ochwepheshe ukuze basize, futhi uma amaqembu efuna ukugcina umndeni, ayethinteka futhi ashintshe kakhulu isitayela sokuxhumana nesimo sengqondo ngomunye nomunye. Ngaphezu kwalokho, sonke singabantu futhi sinelungelo lokwenza amaphutha futhi akekho ongasusa leli lungelo. Ungamangaleli abathandekayo bakho, futhi uma uqaphele ngempela ukukhishwa kwesikhumba, kungcono ukuyixazulula ngokuhlakanipha futhi uphuthukile.
Ukuveza imizwelo. Uma abashadile bengayazi ukuthi umuntu othandekayo uzizwa kanjani, lokhu kubi, kepha uma lo mbhangqwana uveza imizwelo emibi kakhulu - kubi nakakhulu. Ukuze ugcine ukulinganisela ekuboniseni imizwelo, umuntu kufanele azi umlingani wakhe. Isibonelo, uma enenkinga, ungabe usikhulise lesi simo, uthule ukungcola okungaphezulu nakakhulu ekhanda lakhe elithwele kakade. Khumbula ukuthi i-Brak iyazithandela, futhi akekho okufanele enze lutho kunoma ubani, ngoba konke kwenziwa ngokuthanda nangesinyathelo. Lena yindlela kuphela yokugcina ubuhlobo obuhle. Uma ubuhlobo bakho buhanjiswa ngephutha, uzomangaza wonke umuntu ngokubonisa umusa, futhi ukuxazulula izingxabano ngokwakho, futhi okunye, ngokulandela isibonelo sakho, kuzokwenza lokho futhi wonke umuntu uyojabula.
Nika ukuzethemba okukhulu!
Ukuxhumana okungenasisekelo. Njalo ubukele inkulumo ebusweni bomlingani wakho. Ngemuva kokungahambisani, kukhona i-iszor, kunoma yikuphi okukhona okulandelanayo, futhi kungabonakala embonweni womuntu othandekayo wakho. Zama ukuqeda imiphumela yokuphikisana okubambisanayo, kisses, izinto ezihlukahlukene ezimnandi. Amadoda ayajabula lapho isikhathi samasemini emsebenzini we-sms efika kuye: "Ngiyakuthanda" noma "Ngiyazikhumbula", njll. Eqinisweni, ulimi lomzimba lusiza abaningi abasanda kushada ukuba basindise umshado. Sebenzisa leli thuluzi.
Imemori Ngokwemvelo, abantu bayaphikisana kakhulu. Kodwa wonke umuntu uyibheka ohlangothini lwakhe. Isibonelo, umuntu ubheka njengokujwayelekile ukuhlambalaza othandekayo ngamaphutha akwenza ebusheni bakhe, noma "ukuphoqa" ekhaleni labazali bakhe. Lokhu kuyimvelo yomuntu, kodwa uzobonisa inhlonipho uma ungayenzi! Khumbula, konke okwakukhona - kakade esikhathini esidlule futhi akukho okuzoshintsha. Ngaphezu kwalokho, uma ubumba ngokujulile, ngamunye wethu, ngokushoyo, imininingwane yemifino yokuphila komuntu siqu futhi, ngaphambi kokuba uqalekise umuntu owedlule, ucabange ngakho, futhi ukhumbule okwedlule.
Umfazi ufuna ukuhlukanisa
Indlela yokuthola impilo entsha ngemuva kwesahlukaniso
Okufanele ukwenze uma ungavumelani nomthandekayo wakho
Misa ubuhlobo nendoda eshadile
Ukukhubazeka okubangelwa yi-congenital of the fetus
Yini engingayenza ukuze nginciphise ukudla kwami?
Kungani izingane zikhohliswa iminyaka engu-10
Kungani abantu besaba abesifazane abazethembayo
I-ginger likaKhisimusi umuntu omncane
Ama-cutlets avela kuma-eggplant ane-cheese agcwalisa
Ama-bhisikidi ane-Nutella no-ukhilimu
Indlela yokubeka ingane emgqeni enkulisa?
Ukunakekela izinsikazi zesifazane
Isobho ngesipinashi kanye nama-meatballs yenkukhu
Iklabishi "hodgepodge" nama-mushroom